Act-On: tanjona namboarina, SaaS, Fanodinkodinana varotra mifototra amin'ny rahona | Martech Zone
Act-On: tanjona namboarina, SaaS, Fanodinkodinana varotra mifototra amin'ny rahona
Alatsinainy, Septambra 11, 2017 Alarobia, Septambra 13, 2017 Douglas Karr
Ny marketing maoderina dia marketing nomerika. Ny sakany midadasika dia mitaky paikady ivelany sy anatiny, paikady fitarihana ary paikady fikolokoloana, ary programa momba ny fanatsarana ny làlan-dàlana ho an'ny mpanjifa. Mba hahombiazana, ny mpivarotra dia mila vahaolana amin'ny marketing nomerika izay manan-katao, mahay mandanjalanja, mifanindry amin'ny rafitra sy fitaovana hafa, mora ampiasaina, mora ampiasaina, mandaitra ary lafo vidy.
Ankoatr'izay, 90 isan-jaton'ny orinasa manerantany no kely kokoa; toy izany koa ireo ekipa marketing. Na izany aza, ny ankamaroan'ny vahaolana amin'ny automatisation automatique dia tsy natao hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fikambanana kely na ny ekipa marketing kely hita matetika ao anatin'ny orinasa lehibe. Ireo orinasa mampiasa automatique marketing dia mahita fiovam-po tsara kokoa 107%.
Topimaso Vahaolana momba ny vahaolana amin'ny varotra mandeha amin'ny varotra
Act-On manome vahaolana rindrambaiko toy ny serivisy, raharaham-barotra amin'ny alàlan'ny rahona izay ahafahan'ny mpivarotra mifandray amin'ny mpividy mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa. Ny sehatra dia natsangana mba hanomezana ho an'ny orinasa kely sy salantsalany ny sandan'ny rafitra automation marketing amin'ny sehatra orinasa, tsy misy fahasarotana sy loharanom-bola IT izay takiana matetika.
Ny sehatra Act-On dia ahafahan'ny mpivarotra manao fampielezan-kevitra amin'ny marketing be pitsiny manerana ny tranonkala, finday, mailaka ary sosialy. Tafiditra ao anatin'izany ny fahaiza-manao amin'ny: marketing amin'ny mailaka, fanarahan-dia ny mpitsidika tranokala, pejy sy endrika fampiasa, fitarihana scoring sy fikolokoloana, famoahana sosialy sy fanatsarana, programa mandeha ho azy, fitsapana A / B, fampidirana CRM, fitantanana webinar sy maro hafa.
Miaraka amin'ny Act-On, ny ezaky ny marketing dia azo refesina sy havaozina mifototra amin'ny angona sarotra fa tsy ny fahatsapana ny tsinay. Mora ny mpivarotra:
Tantano sy araraoty ny dingana rehetra niainan'ny mpanjifa;
Fandaniam-bola amin'ny marketing ho an'ny vola miditra;
Araho ny hetsika atao amin'ny prospect manomboka amin'ny fidirana an-tsehatra voalohany sy ny fivadihana ka hatramin'ny fivarotana mihidy sy ny famerenana miverina;
Tatitra momba ny fampielezan-kevitra, manomboka amin'ny ambaratonga avo ka hatramin'ny drilldowns amin'ny antsipiriany.
Ny sehatra Act-On dia miavaka indrindra amin'ny fampiasana azy ary koa amin'ny fanohanan'ny mpanjifa tsy manam-paharoa: matetika ny mpampiasa dia manangana ny fampielezan-kevitr'izy ireo voalohany ao anatin'ny andro vitsivitsy (afaka mandany herinandro na volana ny rafitra lova) ary mahazo fanampiana manokana (telefaona / mailaka ) tsy misy sarany fanampiny.
Miavaka ihany koa ny Act-On amin'ny fahafahany miatrika ny filan'ny mpivarotra maoderina ankehitriny amin'ny alàlan'ny fandraisana ny dingana rehetra amin'ny dian'ny mpividy sy ny fanaovana marketing mba hikasika ny dingana rehetra amin'ny androm-piainan'ny mpanjifa (manomboka amin'ny fahatsiarovan-tena sy ny fahazoana azy hatramin'ny fitazonana sy fanitarana ny mpanjifa). Ho fanampin'izany, mamela ny mpivarotra hampiditra rindranasa tsara indrindra amin'ny fitaovana efa ampiasainy izy ireo, noho izany dia manana ny fahafaha-mandanjalanja izy ireo hanamboatra ny valin'ny varotra mifanaraka amin'ny filan'ny orinasany mivoatra.
Fanaraha-maso ny mpitsidika ny tranonkala
Tantaran'ny fifandraisana amin'ny asa-amin'ny
Ny fikarohana nataon'i Act-On dia mampiseho fa ny programa marketing natokana ho an'ny filan'ny indostrialy dia misy vokatra avo kokoa noho izay tsy. Manoloana izany dia nanambara vao haingana ny Act-On ny famoahana ny Act-On Industrial Solutions, izay namboarina ho an'ny indostria maro isan-karazany ao anatin'izany ny fitsaboana, ny dia, ny fitantanam-bola, ny famokarana ary ny varotra antsinjarany, izay mbola ho avy. Natao hanaterana ROI nohatsaraina sy fanatontosana haingana ny automatisation marketing, Act-On Industrial Solutions dia manome:
Content - Modely manokana ho an'ny indostria ho an'ny mailaka, endrika ary pejy fitobiana misy ohatra amin'ny fampielezan-kevitra marobe izay azo ampidirina / aondrana mora foana amin'ny kaonty;
Programs - Ny onjam-piasana mandeha ho azy namboarina hanohanana ny fampielezan-kevitra amin'ny fikolokoloana sy fandraisana andraikitra marobe;
benchmarks - Fahazoana ny valim-panatanterahana mitambatra ho an'ny hetsika marketing amin'ny indostria isan-karazany.
Manaova fitsidihana horonan-tsary an'i Act-On
Hevitra momba ny fifampiraharahana
Ny Engagement Insights dia fitaovana fanaovana tatitra izay manome fidirana amin'ny fotoana tena amin'ny famakafakana fanentanana amin'ny marketing amin'ny alàlan'ny modely azo aondrana sy havaozina mivantana ho an'ny Google Sheets sy Microsoft Excel.
Na dia nanjary zava-dehibe amin'ny fampielezan-kevitra aza ny marketing amin'ny alàlan'ny angon-drakitra ankehitriny, ny fitantanana angona dia mbola fanamby lehibe ho an'ny ankamaroan'ny mpivarotra B2B, araka ny fanadihadiana natao vao haingana. Ny Engagement Insights dia manamora ny fijerena, fanondranana ary fizarana angona, izay ahafahan'ny mpivarotra manatsara sy manatsara ny fampielezan-kevitr'izy ireo ary mahatonga ny angon-drakitra marketing ho azon'ny ekipa hafa manerana ny fikambanana.
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny automatisation marketing
74% amin'ireo orinasa mampiasa automatisation marketing no mahita ROI tsara ao anatin'ny 12 volana na latsaka. Ny orinasa tsirairay dia hanana tanjona tsy manam-paharoa izay manohana ny fizotran'ny orinasany manokana, saingy misy fomba fanao tsara indrindra napetraka izay afaka manampy amin'ny fampiasana ny rafitra automatique marketing anao:
Mamolavola rafitra fitantanana fitarihana amin'ny fomba ofisialy izay mamaritra ny anjara toerana sy ny fifandraisana misy eo amin'ireto fitaovana enti-miasa enina ireto: ny angon-drakitra, ny fandrindrana ny firaka, ny fitarihana ny fitarihana, ny fahaiza-mitarika, ny fitaizan-tanana ary ny refy. Hamarino tsara fa ny varotra sy ny varotra dia mifanaraka amin'ny dingana tsirairay, ary ampiasao ny fiteny mitovy hilazana izany.
Ampifanaraho ny fizotran'ny marketing sy ny tanjona miaraka amin'ny departemantan'ny varotra. Ny mpanjifa dia miditra amin'ny lalan'ny varotra taty aoriana amin'ny fizotry ny fanapahan-kevitra noho ny teo aloha. Marina izany na ho an'ny orinasa B2B na B2C. Midika izany fa tsy afaka mizara anarana voamarina amin'ny departemantan'ny varotra fotsiny ny marketing.
Ny tranomboky automatisation marketing dia tsy maintsy ampidirina atiny izay mampiditra ny mpividy avara-pianarana, ary ny fikambanana dia tsy maintsy mailaka hifandray amin'ireo vinavina vantany vao milaza ny fikasana hividy.
Mitadiava vahaolana momba ny automatisation marketing izay manasongadina ny fitaovana sy ny fahaizan'ny mpivarotra fa tsy ny fepetra takiana amin'ny IT. Ny automatisation marketing dia tokony hotarihin'ireo matihanina amin'ny marketing, fa tsy ny CIO.
Act-On manompo orinasa maherin'ny 3,000 manomboka amin'ny orinasa kely sy antonony ka hatramin'ny departemanta misy orinasa lehibe, manerana ny indostria (toy ny serivisy ara-bola, fitsaboana, famokarana, rindrambaiko, fanabeazana ary teknolojia). Ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia misy ny Xerox, Swarovski, ny Oniversiten'i Ohio ary ny ASPCA, izay iray amin'ireo tranga fampiasana mavesatra kokoa ny LEGO Education.
Ny mpivarotra dia iharan'ny tsindry bebe kokoa noho ny hatramin'izay mba hamoaka valiny amin'ny lafiny rehetra amin'ny androm-piainan'ny mpanjifa. Ny teknolojia ananantsika dia manome hery ny mpivarotra hampiasa angona hitondrana fanapahan-kevitra ary manova ny fomba fifandraisan'ny marika amin'ireo mpividy azy. Vokatr'izany dia tompon'andraikitra sy mahomby kokoa ny mpivarotra ankehitriny, mandray anjara mivantana amin'ny fitomboan'ny vola miditra sy fahafaham-po ny mpanjifa. Andy MacMillan, Tale Jeneralin'ny, Lozisialy Act-On
Fanadihadiana tranga momba ny automatisation marketing - Act-On
Niara-niasa tamin'ny mpanabe sy mpitantana avy amin'ny K-6 hamolavola vahaolana sy loharanom-pahalalana ho an'ny fianarana an-dakilasy ifandraisana, ny LEGO Education dia nivadika automatisation marketing taorian'ny nahatsapany ny vahaolana momba ny varotra mailaka tsy afaka hitombo amin'ny fitomboan'ny orinasa. Vetivety dia voaporofo i Act-On fa mety indrindra amin'ny filan'ny LEGO tsy manam-paharoa, noho ny vidiny mirary sy ny fahaizan'ny scoring lead, ary niasa haingana izy - namoaka hevitra avy hatrany momba ny fantsom-pivarotana LEGO Education ary nanampy ny ekipa marketing an'ny fizarana mba hametraka ho laharam-pahamehana ny fitarika miditra. .
miaraka Act-On, LEGO Education dia afaka nanangana fampielezan-kevitra mandeha ho azy 14 isan-taona (miakatra amin'ny programa mailaka roa voalohany momba ny mailaka), ary ankehitriny dia mankafy 29 isan-jato tahan'ny prospect-to-conversion.
Tags: ab testingAct-Onmarketinghetsika automatique marketingrindrambaiko mihetsikavarotra mandeha ho azyautomatique marketing an-rahonafampidirana crmfitantanana ny androm-piainan'ny mpanjifamailaka Marketingtenypejy pejymitarika fikarakaranascoring firakavarotra marketingtatitra momba ny fampielezan-kevitra amin'ny marketingAutomatique marketing antononyfikarakaranamarketing marketingautomatisation marketing marketing kelyfanentanana ara-tsosialyfamoahana sosialyfitantanana webinarfanaraha-maso ny mpitsidika tranonkala
Zuora: ataovy mandeha ho azy ny fiasa-bola sy ny fisoratana anarana